Ku dhawaad 6.0 dhulgariir baaxad leh ayaa ku dhuftay Australia - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Ku dhawaad 6.0 dhulgariir baaxad leh ayaa ku dhuftay Australia
Ku dhawaad 6.0 dhulgariir baaxad leh ayaa ku dhuftay Australia
Australia ayuu ku dhuftay dhulgariir cabirkiisu ahaa 5.9 meel u dhow magaalada Mansfield, oo u dhow Melbourne, Arbacadii.
Warbixintu waxay diiwaangelinaysaa musiibada dabiiciga ah inay tahay mid ka mid ah dhulgariirradii ugu weynaa ee la diiwaan geliyo ee Australia.
In kasta oo warbixinnadii hore ay faahfaahiyeen dhibco 6.0 ah, misna tan waxaa hagaajiyay Geoscience Australia.
Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada ayaa ka warbixiyey daad-gureyntu intii ay socotay masiibada dabiiciga ah. Dhulgariirku wuxuu waxyeeleeyay dhismayaal badan oo ku yaal aagga, waxaana laga dareemay illaa Sydney iyo Adelaide, inkasta oo aan la soo sheegin dhismayaal ku burburay meel ka baxsan Melbourne.
“Waxay noqon kartaa dhacdo aad u dhib badan, dhulgariir noocaan ah. Waa dhacdooyin aad dhif u ah Australia sidaas darteedna, waxaan hubaa in dadku ay aad u murugoodeen oo ay dhibtay,” Ra’iisul Wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa la hadlay warbaahinta.
Morrison wuxuu kaloo xusay inaysan hadda jirin wax khasaare ah oo la soo sheegay, wuxuuna rajeynayaa “in warka wanaagsan uu sii socon doono.”
Dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa Australia ee 1989 wuxuu ahaa 5.6 magnitude wuxuuna sababay dhimashada 13 qof.
Dhulgariirkii xoogganaa ee Mansfield wuxuu ahaa dhacdo aan caadi ahayn oo dhif ah, Geoscience Australia ayaa xustay, maxaa yeelay magaaladu waxay ku taallaa badhtamaha Indo-Australian Tectonic Plate, halkii ay ka wehelin lahayd xariiq khalada.
Wax digniin tsunami ah lama bixin oo dhacdada la xidhiidha, sida laga soo xigtay Xafiiska Saadaasha Hawada ee Australia.
Previous articleInqilaabkii dhicisoobay ee Suudaan ayaa lala xidhiidhiyay taliskii Bashiir
Next articleUS journalist Bilal Abdul Kareem files Supreme Court petition over ‘kill list’ lawsuit